१२ स्थानीय तहको नतिजा आउँदा ६ पालिका जितेर एमालेको अग्रता, कुन दलको कति (सूचीसहित)
निर्विरोध र निर्वाचित गरी नेकपा एमालेले ६ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको हो । नेपाली कांग्रेसले ३ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको छ । त्यस्तै नेकपा एसले डोल्पाका २ गाउँपालिकामा निर्विरोध प्रमुख जितेको छ । डोल्पामै माओवादी केन्द्रले एक पालिका प्रमुख जितेको छ ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै छ । प्रमुख पदमा एमालेका टिकाराम खड्का एक हजार ६५० मतले अगाडि रहेका छन् । उनले हालसम्म २४ हजार ८९१ मत ल्याएका छन् भने निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले २३ हजार २०६ मत प्राप्त गरेका छन् ।उपप्रमुखमा पनि एमालेको अग्रता कायम छ । एमालेका तर्फबाट उपमेयरका उम्मेदवार स्यानी चौधरीले २४ हजार ५७२ मत प्राप्त गरेर अग्रस्थान रहेका छन् भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर रानाले १७ हजार ३३३ मत प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुबीच सातहजार २३९ को मतान्तर
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै छ । ३५ हजार १७५ मत गन्दा एमालेबाट मेयर पदका उम्मेदवार टिकाराम खड्का ८११ मतले अघि छन् । उनले १५ हजार ४०५ मत ल्याएका...
दाङ, जेठ ८ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार टीकाराम खड्का ८११ मतले अग्रता लिएका छन् । उनले हालसम्म १५ हजार ४०५ मत ल्याएका छन भने उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १४ हजार ५९४ मत ल्याएका छन् । उपप्रमुखमा पनि एमालेको अग्रता छ । एमालेका तर्फबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार स्यानी […]
दाङको तुलसीपुर महानगरमा एमालेको अग्रता कायमै
दाङ - दाङको तुलसीपुर महानगरमा एमालेको अग्रता कायमै छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेबाट मेयर पदका उम्मेदवार टीकाराम खड्काले १५ हजार ४ सय ५ मत पाउनु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १४ हजार ५ सय ९४ मत पाउनु भएको छ । यस्तै, उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीले १४ हजार ६ सय १५ मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीकी जोगबहादुर रानाले १० हजार ८ सय ९२ मत पाउनु भएको छ ।
घोराही उपमहानगरमा एमालेको अग्रता कायमै
घोराही उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै छ। ६२ हजार ८ सय १५ मत गणना हुँदा एमालेका मेयर उम्मेद्वार नरुलाल चौधरीले २५ हजार ६ सय १६ मतका साथ अग्रता लिइरहेका छन्।...
गोकर्णेश्वरमा एमालेको अग्रता, पछ्याउँदै कांग्रेसका दीपक
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ । यही वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना त्यसै रातिदेखि सुरु भएको थियो । एमालेबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार उद्धव विष्टले तीन हजार ७८० मत पाउनुभएको छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका दीपक रिसालले तीन हजार १८५ मतका साथ पछ्याइरहनुभएको छ । नेकपा (एकीकृत …
चितवनको माडी नगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै
३१, वैशाख, चितवन चितवनको माडी नगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै रहेको छ । वडा नं. १ र वडा नं. ९ को ३४३६ मत मतगणना भइसकेको छ । जसमा एमालेको मेयर उम्मेदवार ताराकुमारी काजी महतोले १५६९ मतसहित अग्रता लिइरहेकी छन् । उनलाई सत्ता गठवन्धनका मेयर उम्मेदवार ऋषि काफ्लेले १३८२ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । यस्तै, उपमेयरमा कांग्रेसका खेम […]
पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा मतगणना जारी रहँदा नेकपा एमालेको अग्रता कायम छ । एमालेका अध्यक्ष उमेदवार ३१२ मत ल्याउँदा रुख चिन्हमा १९७ मत प्राप्त गरेको छ । यस्तै, एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष उम्मेदवारले २५५ मत ल्याउँदा माओवादी उम्मेदवारले १७१ मत प्राप्त गरेको छ ।जलजला गाउँपालिका वार्ड १ बाँसखर्कमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । वडा १ बाँसखर्कमा एमालेका उम्मेदवार जगबहादुर रोकाले रुख चिन्न अर्थात गठबन्धनलाई १२ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । विजयी रोकाले २१९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् ।
चितवनको कालिका नगरपालिकामा एमालेको अग्रता
चितवन, वैशाख ३१ । चितवनको कालिका नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनलाई पछि पर्दै नेकपा एमालेले सुरुवाती अग्रता लिएको छ । कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को २०० मत गणना गर्दा एमालेको अग्रता लिएको हो । कालिकाको मेयर पदमा एमालेका बिनोद रेग्मीले ८१ मत प्राप्त गरेका छन् भने गठबन्धनको नेपाली काँग्रेसका शिवराम केसीले ७८ मत प्राप्त गरेका छन् […]